GEEDAHA DHIRTA QORAXDA DHOOBO: SHARAXAADDA NOOCYADA KALA DUWAN IYO SAWIRKIISA, BEERTO IYO DARYEELKA - BEERTA
Apple kala duwan oo leh hardiness jiilaalka yaab leh - Cusbaha cusub
Qoraxda dhoobo - mid ka mid ah noocyada ugu da 'weyn ee tufaaxa, oo loo yaqaanno waddankeena muddo ka badan hal qarni.
Tani noocyo caan ah Ma aha oo kaliya taariikh dheer oo qani ah, laakiin sidoo kale ku baahsan dalka.
Maqaalkani waxaad ka heli doontaa sharax, sawir iyo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan nooca tufaaxa qoriga.
Kala duwanaanta noocaan ah waxaa caadi ahaan loo yaqaan sida horaantii dayrta: miraha sida caadiga ah u bislaadaan horraantii Sebtembar, iyo meelaha qorraxdu ka baxsan ee koonfurta - laga bilaabo bartamaha bisha Agoosto. Badbaadada tufaaxa caanaha waa mid dhexdhexaad ah.
Looma kaydin karo wax ka badan laba ilaa saddex biloodSidaa darteed beeralayda waayo aragnimo leh Ha ka tagin tufaax kala duwan oo kala duwan xilliga jiilaalka, oo u adeegso meelo kala duwan.
Laga soo bilaabo qoriga Khatarta ah, tusaale ahaan, way soo baxaysaa macmacaan udgoon. Haddii aad rabto in aad kordhiso nolosha shafka ah ee tufaaxa quruxda badan leh, waxaad fursad u leedahay inaad sidaan sameyso, adoo raacaya xeerar yar.
Marka hore, waa mid aad muhiim u ah tufaaxa si taxadar leh oo taxadar leh.
Isku day in aad ka qaaddo midho kasta oo bislaado oo ka timaada geedka, iyada oo aan sugin inuu dhulka ku dhaco. Iska ilaali shaki kasta iyo dhaawaca farsamada.in gaabinta nolosha shelf ee tufaax ah.
Si taxaddar leh u soo ururi midhaha la soo ururiyey ee sanduuqyada alwaaxda ah ama weel kale oo la mid ah. Qalcadda ugu fiican oo la gooyey lagu keydiyay meel qalalan oo qabow ku filan (tusaale, balakoonka).
Laakiin qoyaanka xad dhaafka ah iyo heerkulkoodu sarreeyo ma sii dheeraanayaan nolosha tufaaxan kareysa. Haddii aad sameysid shuruudo ku habboon kaydinta tufaaxa, waa suurtogal in aan lagu haynin 2-3 bilood, laakiin ilaa lix bilood.
Qoraxda dhoobo waa oo ah tartan dhab ah xilliga jiilaalka.
Marka loo eego tilmaan-bixiyahan, waxa ay si siman u siman yihiin dhamaan noocyada kala duwan ee tufaaxa lagu yaqaan waddankeena. Geedaha caleenta this ee si ay si fudud u dulqaado kulaylka ugu daran iyo hargabka ugu daran. Badbaadintoodu waa mid cajiib ah.
Xitaa wakhtiyo aad u hooseeya ee dhulkeena qabow, geedahan tufaaxan waxay ku dhacaan waxoogaa yar (heerka heerka dhaawaca ee geedaha xilliga qaboobaha waxaa lagu qiyaasay 0.4 dhibcood oo leh miisaan shan dhibcood ah).
Xitaa heerka ilaalinta noocyada caanka ah (iyo jiilaalka oo aad u adag) jaangooyaha sida Grushovka, Anis iyo Antonovka ayaa lagu qiimeeyay heer hoose.
Gaaban, Geedka Sinnamoon - xulashada ugu wanaagsan ee meelahaas oo ah xilliyada kulaylka adagi aysan ahayn wax aan caadi ahayn.
Baro dhammaan noocyada dayrta ee tufaaxa Aelita iyo Gala.
Qoraxda dhoobo waxa loola jeedaa qofka is-qabadsan dhirta
Waxay ka mid tahay noocyada geedaha tufaaxa ee si fiican u soo baxa si loogu magacaabo iskutallaabta-iskutalaabintataas oo dhirta noocyo kala duwan ah ay ka sameysan yihiin dhirta deriska ah ee kala duwan.
Wixii Cinnamon Striped pollinators ugu guulaha badan yihiindhamaantoodba Paping iyo Moscow GrushovkaSidaa darteed, waxaa lagula talinayaa in ay ku beeri geedaha noocyada kala duwan midba midka kale.
Si aad ah u horumarin kartida awoodda u nugulista (iyo, marka loo eego, dhalidda) Cinnamon Striped ayaa laga yaabaa joogitaanka apiary meel u dhow meesha koritaanka geedo tufaax ah. Daraasaduhu waxay muujiyeen in pollen bee ah waxay kordhisaa wax-soosaarka geedaha, iyo, si aad wax ku ool ah - 50-60%.
Qeexida nooca Cinnamon cusub
Qeexida astaamaha dibadda ee tufaaxa iyo midhaha midhihiisa ayaa si gaar ah u tixgelin doonta.
Cornic Striped noocyo tufaax ah oo aad u kala duwan qaab awood leh oo xoog leh.
Dhirta yar ayaa laga yaabaa inay leeyihiin pyromidal ballaaran oo tufaax ah, da'da qaangaarka ah ee aadka u wayn waxay soo gashaa jaantusyada kale oo ay noqotaa wareeg ballaaran, leh laamood oo dheer iyo khafiif ah.
Qeybta hoose ee laanta ayaa ku dhowaad dhashey, oo leh dabool yar oo foliar ah.
Dhamaadka darfaha caleemaha, caleemaha ayaa aad u ballaaran, badankoodana waxaa la abuuray halkan. Caleemaha dhirta waxaa la yareeyey, cidhiidhi ah at darfaha, leh mugdi yar oo cagaaran yar yar iyo dusha wax yar yar.
Marka noocyada kala duwan ee tufaaxu ay ubax yihiin, ubaxa casaanka ah ee qiyaasta dhexdhexaadka ah ayaa la sameeyaa, oo leh dabeecad qurux badan.
Tufaaxa qoriga waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh. Tufaaxyada aan la saarin badiyaa waxay cagaaran yihiin midab, iyo marka ay bislaadaan, waxay helayaan "qaab" la aqoonsan yahay: jilicsan oo casaan ah, dhibco, xayndaab ku yaal asalka jaalaha ah.
Dhinaca qoraxda, miro ayaa si buuxda u heli kara midabka midabka casaanka.. Cabbirka midhaha waa mid dhexdhexaad ah, tufaaxuna waa qaabka wareegga saxda ah. Maqaarka tufaaxa qoraxda ayaa ah mid sahlan oo iftiin leh.
Saxarka ee miro bislaado waa mid aad u casiir lehhalkii cufan, badanaaba huruud ah, laakiin mararka qaarkood waxay noqon kartaa casaan, gaar ahaan hoosta diirka.
Tufaaxa qoraxda dhadhanka ayaa dhadhamiya, aad u macaan, leh xoogaa yar iyo xusuusta dhadhanka basbaaska (laga yaabo inay tahay sababta noocyada noocaas ah loo yaqaan 'Cinnamon').
Qoriga dhoobo - noocyo kala duwan oo tufaax ah, magaca saxda ah ee alaabtiisu waa lama garanayo.
Inta badan, qofna kama soo bixin, kala duwan ayaa u muuqday dabiici ahsababta oo ah geeddi-socodka dabiiciga ah, ugu horrayn iskutallaabta-pollination.
Qodobadii ugu horreeyay ee Cinnamon Striped ayaa nagu qaadaya xilligii qarnigii sagaalaad. Macluumaadka ku saabsan noocyada kala duwan ee tufaaxa, fiiri buugaagta beerta caanka ah, taariikhda 1810 sano.
Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannada waxay aaminsan yihiin in da'da dhabta ah ee tufaaxa macaantu ay tahay mid aad u fiican, iyo in kala duwan ayaa u muuqday mudo dheer ka hor qarnigii sagaalaad.
Cinnamon dharbaaxay ayaa lagu soo celiyay sheekooyinka uu qoray Anton Chekhov. Iyo hanti maguurtada LN. Tolstoy Yasnaya Polyana, sida ku xusan wargeysyo, waxaa jiray beertii weyn oo tufaax ah.
Gaaban, noocyo kala duwan oo geedo waaweyn oo miro ah ee waddankeena ayaa leh macne gaar ah iyo waa jecel yihiin bannaanka u badan.
Cornish Cunto noocyo tufaax ah ayaa aad u ballaaran oo ku jira dhulkeena. Waxay ku koraan badan yihiin Qaybta dhexe ee Ruushka iyo gobollada waqooyi.
Tani noocyo badan oo caan ah si rasmi ah ugu jiraan diiwaanka gobolka Volga-Vyatka, Central Black Earth, Woqooyi Galbeed iyo gobollada waqooyiga ee dalka.
Sababta qaybinta sida ballaaran u baahsan waa ugu horeyntii iska caabinta jiilaalka ee warshadani khaas ah.
Thanks to dabiiciga ah awood u leh inay u dulqaataan dhibcaha heerkulka oo dhanna u adkeysta xitaa hargabka ugu daran, Tani noocyo kala duwan oo tufaax ah ayaa kori kara xitaa halka geedo kale oo geedo kale ah aysan ku xirnayn cimilada.
Marka la eego diidmada sare ee geedkan, si sahlan ayaa loogu kori karaa gobollada kale ee ka baxsan aagga qaybinta ugu weyn. Qoraxda dharbaaxaysan si fudud u habboon xaaladaha cusub.
Altynai, Gorno-Altai, iyo noocyada tufaaxa ee Gorniinku waxay ku habboon yihiin in laga beero gobollada kor ku xusan.
Iyada oo dhammaan mudnaanta aan la dafiri karin, noocyada kala duwan, nasiib daro, waxay leedahay sifooyin xun.
Mid ka mid ah caqabadaha yar ee qoraxda dhoobo waa mid ma dhalid sare.
Si ka duwan sida geedaha kale ee tufaaxa kale, mid ka mid ah ma aha in la filayo wax-soo-saarka sannadlaha ah ee badan oo kala duwan. Sanadihii ugu guulaha badnaa, hal dhir qoyan ayaa dhali kara wax ka badan 150 kg oo miro ah (marka la barbardhigo: isugeynta celceliska ee hal geed Antonovka waa in ka badan 300 oo karoon).
Intaa waxaa dheer, qoraxda dhoobo wuxuu bilaabaa inuu midho u dhalo isla markiiba ka dib marka la beero, laakiin kaliya sanadka toddobaad, sidoo kale, sanadaha ugu horeeyay ee ka dib dhalidda waxay noqon doontaa mid aad u yar.
Kaliya 10-15 sano oo nolosheeda ah, geedka tufaaxu wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro midho goos goos ah.
Sababta arrintaani waxay ugu horreyn ku leedahay qaabdhismeedka qaabka geedka geedkan.
Waxaa jira frosts miro yar oo geedo tufaax ah sida, Tirada ugu weyn ee miraha waxaa la aasaasay dhamaadka caleemahawuxuu u muuqday geed gaaban sanad ka hor.
Sababtoo ah qaabkan, Cinnamon Striped ma siin karo tiro badan oo tufaax ah.
Si kastaba ha ahaatee Waxyaabaha dhirta ah ee geedaha wax yar ayaa la kordhin karaa iyada oo la adeegsanayo habboon oo daryeel iyo manjooyin ku habboon ee laamaha.
Si aad u geed geedka tufaaxa kala duwan u jilicsan si aad u bilawdo miraha sidda ugu horeysa ee suurtagal ah iyo keenso goosashada wanaagsan, waxaa muhiim ah in si habboon loo cirib tiro oo loo bixiyo daryeelka lagama maarmaanka ah.
First of dhan, waxaa loo baahan yahay dooran goobta saxda ah ee dhulka. Ugu wanaagsan ee geedo yar yar ku haboon bacriminta iyo carrada qoyan oo qoyan oo leh qoyaan fiican.
Markaad beerto geedaha hubi in aysan jirin biyo dhulka ku dhow. Tani waxay saameyn xun ku yeelan kartaa nidaamka asalka ah ee geedaha waxayna diidi karaan dadaalkaaga oo dhan.
Daryeelka Apple waa loo baahan yahay si fiican oo joogto ah.
Ugu yaraan hal mar sanadkii, waa lagama maarmaan in la dalbado bacriminta carrada.
Intaa waxaa dheer, wax badan ayaa kuxiran sax ah oo goos goos ah.
Tan iyo geedka geedkan caanaha ah wuxuu leeyahay khudaar dhuuban oo dheer iyo qadar yar oo caleemo ah, taasi waxay xaqiijinaysaa heer ku filan iftiinka iyo hawada.
Si aad u caawiso tufaaxu u bislaadaan oo yareeyo cayayaanka. waxaa lagu talinayaa in lagu hayo caleenta daciifka ah ee liita.
Way ka fiican tahay in la gooyo laamiyada cirifka ah ee ka baxsan, oo kaliya ka baxa laamaha waaweyn.
Sida geedo kale oo miro ah, geedo tufaax ah oo noocyo kala duwan ah ayaa noqon kara dhibbane cayayaanka ama cudurro gaar ah.
Guud ahaan, iska-caabbinta qoraxda dhoobada qolof iyo cudurro fangas kala duwan ayaa lagu qiimeeyaa celcelis ahaan.
Tufyadani waxay bixiyaan difaac dheeraad ah oo ka dhan ah dhibaatooyinka la midka ah. heerka wanaagsan ee hawada.
Dheeraad ah saameyn togan ayaa sidoo kale ka shaqeynaysa kiimiko gaar ah (waxaa lagula talinayaa in ay qabato hal mar sanad ama laba).
La socoshada manjooyinka saxda ah iyo hubinta habsami u socodka wakhtiga, waxaad yareyn kartaa halista cudurka ugu yaraan.
Geedka Dhumul-qandhada - runtii aad ayuu u jecel yahay dalalkeena, noocyo tufaax ah. Wuxuu ogaadaa sida noocaas ah jacayl qaran.
Inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin, noocyada kala duwan ayaa leh tiro badan oo faa'iido leh, kuwaas oo ah muuqaal muuqaal leh, dhadhan fiican iyo adagaanta jiilaalka aan caadi ahayn.
Dhammaan guryahaas wanaagsan ayaa aad u soo jiitamaya saynisyahanno badan, kuwa jilicsan, in ay soo saaraan ku saleysan Dhammaan dhoobada dhererka kale ee kale, isla heerarka dhadhan fiican leh iyo jiilaalka adag-adag.
Waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, noocyada noocan oo kale ah sida Farxad dayrta iyo Dhalinyarada dabiiciga ah.
In ereyga Qori laga sameeyey - xushmadda dhabta ah ee bannaanka guri.
Kala duwanaanshahan, oo sii kordhaya gobollo badan oo ka mid ah waddankeena, muddo ka badan hal sano iyo xitaa hal qarni waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Daawo fiidiyowga ku saabsan quudinta iyo cayayaanka.